ကလေးပြင်းထန်ဓါတ်မတည့်ခြင်းများ - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာခြင်းနည်းလမ်းများ » ကလေးပြင်းထန်ဓါတ်မတည့်ခြင်းများ
၂၅%သောသူများတွင် တခုသို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုသော ဓါတ်မတည့်ခြင်းရှိနိုင်သည်။ ထို%ကလည်းတဖြည်းဖြည်းချင်းမြင့်တက်လာသည်။ ကျနုပ်တို့က ဓါတ်မတည့်ပါက အင်ပြင် ယားခြင် နှာချေခြင်း နှာရည်ယိုခြင်း မျက်ရည်ယိုခြင်းတို့ဖြစ်မည်ဟုယူဆကြသည်။
သို့သော် အပေါ်ကလက္ခဏာများက ဓါတ်မတည့်ရောဂါ၏လက္ခဏာတစ်ချို့သာဖြစ်သည်။ ဓါတ်မတည့်သော တုံပြန်ခြင်းဆိုတာဘာလဲ။ ဖြစ်စေသောအရာနှင့်နောက်ဆက်တွဲများကိုသတိထားနေသင့်သည်။
ဓါတ်မတည့်သောတုံပြန်ခြင်းသည် အလွန်ဆိုးသောဓါတ်မတည့်ခြင်းဖြစ်ပြီး အသက်အန္ဓါရယ်ထိရှိနိုင်သည်။ ခန္ဓါကိုယ်ခုခံအားစနစ်က ဓါတ်ပစ္စည်းကိုတိုက်ခိုက်သည်။ ဓါတ်မတည့်သောတုံပြန်ခြင်းက အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ပြိး ချက်ခြင်းကုသမှုကိုလိုအပ်သည်။ လက္ခဏာများတွင် အသက်အန္ဓရယ်ရှိသော လေပြွန်နှင့် အသက်ရူခက်ခဲခြင်းတို့ပါဝင်နိုင်သည်။ သွေးပေါင်ချိန်ချက်ချင်းကျ ပြီး မူးခြင်းမေ့သွားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အခြားလက္ခဏာများပြီးယောင်ပြီး ယားသော အကွက် များပေါ်တတ်သည်။
ဆရာဝန်ကအချို့သောဓါတ်မတည့်မှုဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာမသိသေးပါ။ မိသားစု လိုက်ဖြစ်ပါက ကလေးများတွင်ပိုဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုအကြောင်းကဘာကြောင့်ဖြစသည်ဟုမသေချာသော်လည်း တခုသော သီအိုရီ က သန့်ရှင်းပြီး အကောင်မရှိသောပတ်ဝန်းကျင်က ခုခံအားစနစ်ကိုတိုက်သောအကောင်များကိုနည်းစေသည။ ထိုအပြင် အချို့သောအရာများက ဓါတ်မတည့်သော တုံပြန်ဥကိုဖြစ်စေသည်။ ပိုးကောင် ပျား အချု့ိသောအစားများ ဥပမာ အခွံမာသီး သို့မဟုတ် အခွံမာရေသတ္တဝါ အချို့သောဆေးများ ဥပမာ ပနက်စလင သို့မဟုတ် အပလင် အချို့သောအပင်များ ပိုလန်တို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
ပြင်းထန်သော ဓါတ်မတည့်ခြင်းက မပြင်းထန်သောလက္ခဏာများခဏခဏဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်သည်။ သို့သော် အချို့သောကိစ္စများတွင် မပြင်းထန်သောလက္ခဏာ ဥပမာ ဓါတ်မတည့်သောအကွက်(အင်ပြင်)မရှိခြင်းပဲ တခါတည်းပြင်းထန်မှုဖြစ်ခြင်းစဖြစ်နိုင်သည်။ အလယ်အလတ်နှင့်ပြင်းထန်သောလက္ခဏာများတွင် ဗိုက်နာခြင်း အသက်ရူမမှန်ခြင်း ဒေါသထွက်လွယ်ခြင်း ရင်ဘတ်နေထိုင်မကောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ချောင်းပြင်းပြင်းဆိုးခြင်း ဝမ်းလျောခြင်း တရွီရွီမည်ခြင်း အစာမြိုချရခက်ခြင်း မူးခြင်း မျက်နာနီရဲခြင်း အန်ခြင်း ပျို့ခြင်း ရင်တုန်ခြင်း မျက်နှာမျက်လုံး သို့မဟုတ် လျှာယောင်ခြင်း သတိမေ့ခြင်း စသည်တိုဖြစ်သည်။
ထိုသို့ဖြစ်ပါက အပီနက်ဖရင်းထိုးခြင်း(သင်တွင်ရှိပါက)နှင့် ၉၁၁ခေါ်ခြင်း သို့မဟုတ် ချက်ချင်းအရေးပေါ်သို့သွားသင့်သည်။ လိုအပ်ပါကသင့်သူငယ်ချင်းကိုပြောပြီးအကူအညီတောင်းနိုင်သည်။
အသက်ရူခက်နေပါကထိုသို့ဖြစ်သောသူခေါင်းအောက်သို့ခေါင်းအုံးမထည့်ပါနှင့်။ ထိုသို့လုပ်ပါက အသက်ရူလမ်းကြောင်းကိုပိတ်စေနိုင်သည်။
ဓါတ်မတည့်ခြင်းဖြစ်ပါက ၉၁၁ကိုခေါ်ပြီး ဆေးထိုးပေးပါ။ ရောဂါမသေချာလျင်ပင်ဆေးထိုးဖို့မမေ့ပါနှင့်။
ပြင်းထန်သော ဓါတ်မတည့်ခြင်းဖြစ်တတ်သောကလေးအတွက် အပီနက်ဖရင်းပါသောအရေးပေါ်သေတ္တာသယ်ရန်မမေ့ပါနှင့်။
ဖြစ်စေသောအရာများ ဥပမာ အစာဆေးစသည်တို့ကိုရှောင်ပါ။ အပြင်မှာစားပါက ပါဝင်ပစ္စည်းသေချာမေးပါ။ ပါဝင်ပစ္စည်းကိုသေချာဖတ်ပါ။ မတည့်သောအစာမျို့းရှိတတ်ပါက အစာအသစ်ကိုကျွေးမည်ဆိုပါကကလေးကိုနည်းနည်းစီကျွေးပါ။ အရေးပေါ်ပြင်းထန် ဓါတ်မတည့်မှုဖြစ်တတ်ပါက ဆေးဝါးကုမှု အိုင်ဒိကိုဆွဲထားခြင်း အရေးပေါ်ဆေးဝါးများကိုသယ်သွားခြင်းလုပ်သင့်သည်။ သင်အပီနက်ဖလင်းထိုးဆေးကိုအခြားသူတွင်မထိုးပါနှင့်။ အချို့သောအခြေအနေ (ဥပမာ နှလုံးရောဂါ)ရှိပါက ထိုအခြေအနေကပိုဆိုးစေနိုင်သည်။
ဓါတ်မတည့်ခြင်းကအဖြစ်များသည်။ ကလေးများတွင်ပိုဖြစ်နိုင်သည်။ အချို့သောဓါတ်မတည့်ခြင်းက အသက်ကြီးလာသည်ကပျောက်သွားသော်လည်း အများစုကဆက်ရှိနေနိုင်သည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင် အရင်ကဓါတ်တည့်ဖူးခြင်းမှ ဓါတ်မတည့်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဓါတ်မတည့်ခြင်းက သင့်ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုထိခိုက်စေနိုင်သည် သို့သော် များသောအားဖြင့် မပြင်းထန်ပဲထိန်းချုပ်ကုသနိုင်သည်။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ မေ 27, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဇွန် 14, 2018
Serious allergic reactions (Anaphylaxis). http://kidshealth.org/en/parents/anaphylaxis.html. Accessed August 18 , 2016
Allergic reaction. http://www.healthline.com/health/allergies/allergic-reaction#Overview1 . Accessed August 18, 2016
Children & Allergies. http://acaai.org/allergies/who-has-allergies/children-allergies. Accessed August 18,2016
Severe allergy: symptoms and treatments. http://www.healthline.com/health-slideshow/severe-allergy-symptoms#8. Accessed August 18 , 2016
ညဘက်တွေမှာ ဘာကြောင့်မျက်စိယားယံတာလဲ၊ ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ
မိခင်နို့နဲ့ ဓါတ်မတည့်တဲ့ ကလေး ရှိလား
အဝတ်အစားကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ဓါတ်မတည့်ခြင်းအကြောင်း
ကလေးမွေးဖွားခြင်း, မိခင်ကျန်းမာရေး, ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း
ဗိုက်အရမ်းမနာစေဘဲ မီးဖွားလို့ရစေတဲ့ Epidural Analgesia (EA) ရဲ့ ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးတွေ ။ ။
အဖြစ်များတဲ့ ဓါတ်မတည့်စာ (၇) မျိုး
တက်တူးထိုးထားတဲ့နေရာက ယားနေရင် ဘာလုပ်သင့်လဲ